Wix dia mamela anao hamorona tranokala mora foana ary maimaim-poana | Famoronana an-tserasera
Wix Izany dia tranokala famoronana tranokala maimaimpoana y mora ampiasaina. Tsy mila fahalalana ara-teknika mihitsy ary ireo pejin-tranonkala dia Milina fikarohana 100%. Ny tonian-dahatsoratra izay ampiasaina dia mora ampiasaina, ary mamela anao hamorona ny pejin-tranonkalanao araka ny itiavanao azy, amin'ny alàlan'ny hisintona ary mandatsaka tonian-dahatsoratra. Safidio fotsiny ireo singa tianao ampiana (sary, lahatsoratra, endrika fifandraisana, sns.), Ary sintomy amin'ny toerana tianao ao anatin'ny pejinao izy ireo. Tsy ho mora kokoa !. Aseho anao eto ny horonantsary iray milaza fa mora ny mamolavola ny tranonkalanao.
Azonao atao ny misafidy mamorona ny pejinao a karazana modely maro karazana natao ho an'ny matihanina, na azonao atao ny mamorona ny pejy avy am-boalohany miaraka amin'ny iray aminay maodelim-poana. Serivisy mifameno izy io ahafahanao manitatra ny asanao sy mampitombo ny mpanjifanao. Betsaka ny maodely mifanaraka amin'ny ilainao: Fivarotana an-tserasera, orinasa, sary, mozika, zavakanto famoronana ary trano fisakafoanana.
Matetika, ny vidin'ny famoronana sy fikojakojana tranokala amin'ny fampiasana developer matihanina dia mety handany vola -jatony, Na mandra-pahatongan'ny euro an'arivony. Ny mpamoaka Wix dia noforonina mba ho araka ny fampiasa amin'ny mpampiasa araka izay tratra, ka afaka manana fotoana mety izay rehetra manana solosaina mamorona tranokalanao manokana.
Manasa anao hampiasa Wix maimaim-poana, raha mbola tianao ary mamorona pejy web araka izay tianao. Raha te hitondra ny tranokalanao amin'ny ambaratonga manaraka ianao dia azonao atao ny manatsara ny iray amin'ireo drafitra Premium mamela anao mampifandray ny fonenanao manokana, esory ny doka Wix ary maro hafa. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny drafitra Premium misy anay, kitiho eto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » lohahevitra » Ny WIX dia mamela anao hamorona tranokalanao mora foana ary maimaim-poana izany
Christian Rodriguez dia hoy izy:
Tokony asehon'izy ireo fa doka io fa tsy lahatsoratra fotsiny, toy ny any amin'ny firenena sasany ataon'izy ireo amin'ny youtubers rehefa manao fanadihadihana izy ireo dia tsy maintsy asehony raha misy ny fanohanana karazana karazana marika voalaza, amin'ny lafiny hafa dia tsy etika ny tsy lazao izany.
Valiny tamin'i Cristian Rodriguez
Miala tsiny aminao milaza aminao fa tsy dokam-barotra izany, ary tsy nandoa anay tamin'io koa izy ireo.
Heveriko fa fitaovana tsara ho an'ireo tsy mahalala firy momba ny fampandrosoana web izany, ary mety ho mora amin'ny olona sasany.
Ary averiko ihany, tsy nisy fiampangana